नेपालगन्जमा लखनउबाटै हवाई इन्धन- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
ढुवानी भाडा र खर्च आधा जोगिने
काठमाडौँ — नेपालगन्ज डिपोमा अब लखनउबाटै हवाई इन्धन ढुवानी गरिने भएको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालयअन्तर्गत रहेको हवाई इन्धन डिपो नेपालगन्जमा इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) को इलाहाबाद डिपोबाट हवाई इन्धन ढुवानी गरिँदै आएको थियो ।
लखनउबाट ढुवानीसमेत सुरु भइसकेको छ । ‘इलाहाबाद र अमौसीको तुलनामा ढुवानी दूरी झन्डै आधा फरक पर्छ,’ इन्धन तथा हवाई इन्धन डिपो नेपालगन्जका सूचना अधिकारी अजितकुमार पोखरेलले भने, ‘दूरीमा आएको कमीसँगै ढुवानीबाट हुने खर्च पनि बचत हुन्छ ।’ निगमका अनुसार नेपालगन्जस्थित भारतीय नाका रुपैडिहादेखि लखनउको दुईतर्फी दूरी करिब ४ सय ५० किमि मात्रै पर्छ । लखनउबाट ढुवानीका लागि विगतमा पनि छलफल भएको निगमले बताएको छ । तर आपूर्तिका विषयमा आईओसीले सहमति जनाएको थिएन । ‘इलाहाबादको विकल्पमा लखनउबाट ढुवानी गर्ने विषय करिब १५ वर्षदेखि पेन्डिङमा थियो,’ निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले भने, ‘पछिल्लो समय आईओसीमा भएको छलफलमा उक्त डिपोबाट ढुवानी गर्न सहमति भयो । यसले ढुवानीमा लाग्ने समयसँगै पैसाको पनि बचत हुन्छ ।’
नेपालगन्ज डिपोबाट कर्णाली प्रदेशिक कार्यालय सुर्खेतमा समेत स्टक ट्रान्सफर हुन्छ । नेपालगन्ज डिपोका लागि डिजेल र पेट्रोल भने गोन्डाबाट आयात हुन्छ । नेपालगन्ज डिपोमा हवाई इन्धनका लागि २ सय ८० किलोलिटर क्षमता छ । डिजेल २ हजार २ सय ८० किलोलिटर र पेट्रोल २ सय १० किलोलिटरको क्षमता छ । उक्त पेट्रोल र डिजेलको भण्डार विस्तारकै क्रममा छ । हवाई इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा प्राप्तिकै क्रममा रहेको प्रवक्ता उपाध्यायले जानकारी दिए ।
नेपालगन्जबाट दाङमा पनि हवाई इन्धन पठाउने निगमको योजना छ । काठमाडौंका लागि भने रक्सौलबाट हवाई इन्धन ढुवानी गरिन्छ । मुलुकभर हवाई इन्धन बोक्ने करिब दुई सय ट्यांकर छन् ।
प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७७ ११:१९
‘५ नेपाली खानाको छनोट गरेर विश्वव्यापी फुड टुरमा लैजाने योजनामा छु ।’
‘नेपालमा धेरै राम्रा सेफ भए पनि सरकारले प्रचारप्रसार गरिदिएको छैन ।’
फाल्गुन १४, २०७७ जनकराज सापकोटा, बुनु थारु
दुई वर्षपछि बिहीबार मात्रै नेपाल फर्केका सेफ सन्तोष साहसँग उनको जीवनको संघर्ष, सफलता र नेपाली खानाको विश्वव्यापीकरणबारे जनकराज सापकोटा र बुनु थारूले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
देहातमा संघर्षशील बाल्यकाल बिताउनुभयो । ती दिन सम्झिँदा कस्तो लाग्छ ?
बाल्यकालका स–साना कुरा जहिल्यै सम्झिरहेको हुन्छु । तर त्यसलाई मैले संघर्ष भनिनँ । सायद त्यो बाल्यकाल नभएको भए आज यस्तो हुँदैनथेँ होला । अथवा योभन्दा राम्रो पनि हुन सक्थ्यो । म जहाँ पनि मौका मिल्यो भने बाल्यकालको कुरा सुनाइरहेको हुन्छ किनकि त्यसले अरूलाई प्रेरणा मिलोस् । जसले जीवनमा कोही छैन, घर छैन वा बाआमाले पढाउन सकेनन् भनेर सोच्छन्, उनीहरूको मनोबल बढाउन पनि म बाल्यकालको कुरा भन्छु । चाह्यो भने गर्न सकिन्छ । ढिलो हुन्छ तर हुन्छ नै ।
तपाईं एसएलसीमा ३ वटा विषयमा फेल हुनुभएको थियो । तर, पढाइमा धेरै जान्ने नभए पनि अगाडि बढ्न सकिने रहेछ है ?
अस्ति मलाई कक्षामा जहिल्यै फर्स्ट हुने एक जना स्कुले साथीले म्यासेज गरेको थियो । हामीलाई सरले हुने बिरुवाको चिल्लो पात भन्ने उखान सुनाउँथे । उसले मलाई जिस्काउँदै भन्यो, तँ पढाइमा त्यति जान्ने थिइनस् । तर तैंले नै यस्तो सफलता हात पारिस् । सरले भनेको कुरा त गलत रहेछ भन्यो । हो, एसएलसीमा २ वटा गणित र अंग्रेजीमा फेल भएपछि म भारत पसेको थिएँ ।
मान्छेमा केही कमी छ भने कुनै बलियो पक्ष पनि हुन्छ । त्यो हेर्न जरुरी हुन्छ । कमीलाई सुधार्नुपर्छ । तर आफूभित्र के शक्ति छ भनेर खोज्न जरुरी हुन्छ । हरेक मानिसमा केही न केही फरक कुरा हुन्छ । सायद मभित्र खाना बनाउने कुरा थियो । त्यो खोज्न पनि मलाई वर्षौं लाग्यो ।
गुजरातमा ९ सय भारुमा काम सुरु गर्दा मेरो बाटो यही हो भन्ने लागेको थियो कि त्यसको धेरैपछि आफ्नो बाटो चिन्नुभयो ?
गाउँमा हुँदा झोला र पाउरोटी बेचेर २०–२५ रुपैयाँ कमाउँथेँ । केही महिनापछि नै मासिक ९०० भारु कमाउन थालेपछि कसलाई लाग्दैन, मेरो बाटो यही हो भनेर ? गाउँमै भएको भए त त्यति पैसा कमाउन वर्षदिन लाग्थ्यो । सुरुमा भाँडा धुनु पनि सफलता लाग्थ्यो । त्यतिबेला भाँडा धुनु सानो कुरा मानिन्थ्यो, अहिले लन्डनमा त त्यस्तो मानिँदैन । हामी आफैं पनि भाडा धुन्छौँ । विस्तारै मेरा लागि अब यही पेसा हो भन्ने लाग्दै गयो । ५–६ महिना भाँडा धोएपछि मैले सेफको काम सिक्ने मौका पाएँ । त्यसपछि निरन्तर यसैमा लागिरहेँ ।
सफलता निरन्तरताले हुन्छ वा बुद्धि पनि त्यसमा मिसिनुपर्छ ?
सफलता सबैको मिश्रण हो । सफलताको अर्थ पनि सबैका लागि फरक–फरक हुन्छ । कसैलाई सफलता भनेको १० वटा होटल चलाउनु होला । कसैलाई घरमा हेलिप्याड बन्नु होला । मेरा लागि सफलता भनेको मेरो मातहत ५० जनाले काम गरून् भन्ने होला ।
मैले भनेको कुरा नै अन्तिम सत्य हो भन्दिनँ । तर मेरो सफलता भनेको सन्तुष्टि हो । पाउरोटी बेच्दा पनि सफल नै ठान्थेँ । एकदम खुसी थिएँ । कमाएको २० रुपैयाँले २ महिना घर चल्थ्यो । खेतबाट धानचामल आउँथ्यो, मसला मात्र किन्नुपर्थ्यो । ९ सय भारु कमाएको बेला अलग्गै सफलता लाग्यो । किनकि त्यति पैसाले ६ महिना घर चल्थ्यो । म जे छु त्यसमा सन्तुष्ट छु । अब के गर्ने ? भनेर आफैंले सोधिरहेको हुन्छु ।
किशोरावस्थामा अनेक विचार आउँछन्, कुन सही र गलत भन्ने दोधार हुन्छ । कुन बाटो गएमा सफलता मिल्ला भन्ने दोधार तपाईंलाई भयो भएन ?
८–१० मा पढ्दा हिन्दी चलचित्र हेरिन्थ्यो । चलचित्रमा हिरो डाक्टर बनेको देख्दा मलाई त्यस्तै बन्न मन लाग्थ्यो । हिरो समाजसेवी बने त्यही हुन मन लाग्ने । बाल्यकालमा र किशोरावस्थामा सबैलाई त्यही हुने रहेछ । तर सोच्नुपर्ने कुरा तपाईंलाई के कुराले खुसी दिन्छ ? केमा सन्तुष्टि मिल्छ ? त्यो काम गर्नुपर्छ । त्यो युवा उमेरमा पहिला नै थाहा भइहाल्छ । भारत गएपछि थाहा भयो मलाई यसमा लाग्नुपर्छ भनेर । भाँडा धोएपछि सेफ बनिन्छ त्यसपछि ठूलो सेफ बनिन्छ भन्ने लाग्यो । त्यसपछि विदेश, मास्टर सेफ अहिले किताब लेख्दै छु ।
राम्रो लाग्ने काममा मात्र व्यस्त भइन्छ । नराम्रो लाग्ने काममा व्यस्त हुनुभयो भने तपाईंको टाउको दुख्न सुरु हुन्छ । मलाई खाना बनाउन मन लाग्छ त्यसैले म १२–१४ घण्टा काम गरिदिन्छु । कति दिन त रेस्टुरेन्टमा कुर्सीमा पनि सुतेको छु । काममा लगाव देखाउन जरुरी हुन्छ । यो भनेको सकरात्मक सोच हो । यसले तपाईंलाई सफलता दिन वातावरण बनाउँछ ।
सुरुमा गुजरात हुँदै मोन्टोनेग्रो पुग्नुभयो । त्यसपछि पनि ठूलो क्षेत्रमा जानुपर्छ भन्ने किन लाग्यो ?
त्यतिबेला सबैभन्दा ठूलो पोजिसिन एक्ज्युकेटिभ सेफ थियो । म प्राइभेट होटलको किचनको इन्चार्ज थिएँ । मलाई लाग्यो, के म ताज होटलको सेफ बन्न सक्छु त ? तर मेरो क्षमता पुगिसकेको थिएन । त्यसपछि विदेश जाने र एक्ज्युक्युटिभ सेफ बन्ने सपना देखेँ । मोन्टेनेग्रो गए । तर सिक्न खोजेको कुरा नपाएपछि एक वर्षपछि गुजरात फर्कें । त्यहाँ सिकेको कुरा देखाउन गुजरातमा फुड फेस्टिबल गरेँ । फेस्टिबलको खबर मिडियामा आयो । त्यसले मलाई लन्डन पुर्‍यायो ।
लन्डन गएपछि कस्ता संघर्ष सुरु भए ?
संघर्षभन्दा पनि नयाँ सिकाइ सुरु भयो । मलाई लन्डन लाने मान्छेले झूटो बोलेको रहेछ । राम्रो रेस्टुरेन्ट हो भनेर फोटो देखायो, पत्याएँ । गुजरातमा मेरो मातहतमा तीस/चालीस जनाले काम गर्थे तर त्यहाँ जम्मा तीन जना थिए । पैसा पनि भनेजति दिएन । भारतमा कमाउनेभन्दा आधै कम थियो । कामको लोड धेरै । ३–४ महिना काम गरेपछि अर्को जागिर खोजेँ । त्यहाँ ६ महिना काम गरेपछि मनपर्ने सेलिब्रेटीकोमा काम पाएँ । त्यसपछिका ५ वर्षमा ५ वटा जागिर परिवर्तन गरेँ ।
मास्टर सेफ प्रोफेसनल्स यूकेको उपविजेता बनेपछि त संसारभर तपाईँको खोजीनिती भयो । तपाईंले पनि संसारभर पाककला गरिरहेका नेपालीबारे पनि थाहा पाउनुभयो होला । नेपालीको पाककलामार्फत नेपाली खाना कत्तिको चिनिएको छ ?
तराईमा एउटा कहावत छ, अपन बारीके बथुवा तित अर्थात् आफ्नो बारीको साग सबैलाई तितो लाग्छ । मलाई पनि पहिले त्यस्तै लाग्थ्यो, नेपाली खाना के नै छ र ? दाल, भात तरकारी, मःम र थुक्पा मात्रै । यस्तै सोच अरू नेपालीमा पनि छ । धेरै नेपालीले आफ्नो होटलबाहिर इन्डियन फुडलाई ठूलो अक्षरमा र नेपाली फुड भनेर सानो अक्षरमा लेख्छन् । तर, हाम्रो क्षमता भनेकै नेपाली खाना हो ।
सबै देशका खाना बनाउन सिकेर म दुई सालयता नेपाली खाना सिकिरहेछु । कैयन् नेपाली जापनिज सेफ छन्, कैयन् चाइनिज, कोही टर्किस त कोही कोरियन सेफ छन् । अनि नेपालीले इन्डियन रेस्टुरेन्ट चलाएका छन् । तर सबै ठाउँमा उहाँहरूको मात्रै गल्ती पनि होइन । नेपाली ग्राहक नै छैनन् भने त के गरून् ?
नेपालमा धेरै राम्रा–राम्रा सेफहरू भए पनि सरकारले प्रचारप्रसार गरिदिएको छैन । जस्तो, थाइल्यान्ड जानुस्, जहाँ पनि थाई खानाको प्रचार देख्न सकिन्छ । जहाँ गए पनि थाई परिकार मात्रै भेटिन्छ । तर हाम्रोमा उल्टो छ । हामीकहाँ एकैछिन् घुम्नुस् त । चारवटा इटालियन परिकार पाइने ठाम भेटिन्छ तर दाल–भात–तरकारीवालाबाहेक अरू नेपाली खाना पाइने ठाउँ भेटिन्न ।
के नेपाली खानाले पनि विश्वव्यापी रूपमा नेपालीको पहिचान बनाउन सक्छ ?
विश्वव्यापी बनिसक्यो । बीबीसीको मास्टर सेफ प्रसारण हुने जुनकुनै ठाउँमा जानुस् नेपाली खानाको कुरा सुनिन्छ । जतिबेला मास्टर सेफ प्रसारण भइरहेको थियो, त्यतिबेला लक डाउनका कारण मानिस घरभित्र थिए । त्यतिबेला नेपाली खानाको व्यापार दोब्बर भइरहेको थियो । त्यसैले नेपाली खानाले पनि हामीलाई चिनाउन सक्छ । आजै म विमानस्थलमा आउँदा तन्नेरी पुस्ताका सेफहरू थिए । अबको ५ सालभित्र ५० वटा सन्तोष जन्मिन्छन् । नेपालमै पनि मास्टर सेफको प्रतियोगिता आउँदै छ । नेपालीहरूको मनोबल बढेको छ ।
नेपाली खानामा के त्यस्तो शक्ति छ, जसले यो विश्वभर चिनियोस् ?
हाम्रो खानामा धेरै फ्लेवर छ, कम्बिनेसन छ र फ्रेसनेस छ । हाम्रो खाना कुनै पनि ओभरलोडेड छैन । मःम नै लिऔं, यो हेल्दीका साथै राति, दिउँसो जतिखेर पनि खान सकिन्छ । जोसुकैले खान सक्छ । पिरो कम गरियो भने मःम जुनसुकै उमेरकाले पनि खान सक्छ । कुनै पनि देशमा जुनसुकै उमेर समूह र जुनसुकै जातीय समूहले खान सक्ने यस्तो खाना छ ? यो त भेजले पनि खान सक्छ । ननभेजले पनि खान सक्छ । त्यस्ता धेरै लुकेका खानेकुराहरू हामीसँग छन् ।
नेपाली खाना प्रचलित भइसकेको छैन । तर अहिले दुनियाँभरका युट्युब च्यानलहरू नेपाल आउन थालेका छन् । मैले पनि युट्युब सुरु गरेको छु । स–साना कुराहरू कसरी बनाउने भनेर सिकाउन थालेको छु । केही दिनअघि मैले नेपालका ६ मसलाहरू भनेर भिडियो बनाए । मेथी, टिम्मुर धनिया, खुर्सानीलाई रोस्ट गरेर ६ मसलाहरू बनाएर देखाएको छु । अहिले यस्तैयस्तै कुराहरूमा अनुसन्धान गरिरहेको छु । ताकि हाम्रो पनि केही चिज देखियोस् । परिकारकै बारेमा किताब लेख्ने योजना बनाएको छु ।
नेपाली खानाको इतिहास खोज्दै गयो भने दरबारहरूमा पुगिन्छ । पृथ्वीनारायण शाहको गोर्खाली ज्युनार भनेर कवि सुवानन्ददासले कविता नै लेखेका छन् । जसमा नेपालको सिन्की लुटी मंरातको घिले भुटी, पालपाको ल्याउ हिङ जिरो री सिङ को ल्याउ पिरो ! ...यस्तै यस्तै लेखेका छन् । तर यस्तो बखानयुक्त खाना आममानिसमाझ जान सकेन नि ?
तपाईंले एकदमै सही भन्नुभयो । मैले अध्ययन गर्दा नेपालीको खानाको कल्चर नेवारी खानामा भेटिन्छ । तराई समुदायमा, थारू, लिम्बू र राजवंशी समुदायका पनि आ–आफ्नै परिकारहरू छन् । तर नेवारहरूमा हेर्दा कहाँबाट सुरु भयो थाहा छैन, उनीहरूले भोजमा कोर्सअनुसार खाना खान्छन् । अन्तिममा थलथले खान्छन् । उनीहरूले कहाँबाट सिकेर यो प्रचलन सुरु गरे थाहा छैन । यस्तो खानाको संस्कृति त पहिलेदेखि नै हामीसँग थियो । जुन कुरा कैयौं देशमा छैन ।
पहिलेदेखि नै भएको कुरा हामीले किन बाहिर ल्याउन सकेनौं । हाम्रो गरिबीका कारण पो होकि । तर पर्यटकहरूलाई हाम्रो खानाको अनुभवले तान्न सक्छ । नेपाली खाना बनाएर देखाउने मेरो टीभी कार्यक्रम पनि सञ्चालनको तयारीमा छ । रिसर्चबाट ५ नेपाली खानाको छनोट गर्छु र विश्वव्यापी फुड टुरमा लैजाने योजनामा छु ।
नेपालमै आउने विदेशी पर्यटकलाई कसरी नेपाली खानाको स्वाद चखाउने त ?
खानाको प्रचार गर्नुभन्दा पहिले सरकारले यसको स्वस्थकर मापदण्ड बनाइदिनुपर्छ । पर्यटकबाट पैसा कमाउने हो भने पहिलो यो काम गर्नैपर्छ । सरकारलाई यसबारे कुनै दिन सोच्ला किनभने मन्त्री, पर्यटक विभागका कर्मचारीले विदेश घुम्दा खानाको स्वास्थ्य मापदण्ड देखेकै होलान् नि ।
प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७७ १०:२१